Warshad soo saarta baradhada ayaa laga furi doonaa gobolka Tula - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Bishii Diseembar 29, Badhasaabka Gobolka Tula Aleksey Dyumin iyo Agaasimaha Guud ee McCain Foods Rus LLC Alexander Petrov ayaa kala saxeexday heshiis dhismaha dhismaha barandho lagu sameeyo ee 'Uzlovaya SEZ'.
«McCain Foods Limited ”waa hogaamiye caalami ah oo ka mid ah soo saarayaasha cuntada la qaboojiyey. Shirkaddu waxay soo saartaa saddex meelood meel dhammaan shiilannada Faransiiska ee adduunka. Dhismaha dhismaha ee Uzlovaya wuxuu noqonayaa goobti ugu horreysay ee wax soo saar ee Ruushka. Waxaa la qorsheynayaa in lagu maalgeliyo ilaa 12,7 bilyan oo rubles mashruuca.
“Sharaf weyn ayey u tahay gobolka Tula in shirkaddu u dooratay gobolkeenna hirgelinta mashruucooda maalgashiga. Waxay abuuri doontaa in ka badan 160 shaqo oo fududeyn doonta soo bixitaanka xarumaha saadka cusub iyo tas-hiilaadka keydinta. Waxay oggolaan doontaa oo keliya in lagu qanco baahida gudaha, iyadoo la beddelayo sahayda wax laga soo dejiyo, laakiin sidoo kale waxay ka shaqeyn doontaa dhoofinta mustaqbalka, ”ayuu yiri Alexey Dyumin intii uu socday kulan shaqo oo uu la yeeshay maal-galiye.
Alexander Petrov wuxuu uga mahadceliyey Gudoomiyaha taageeradiisa wuxuuna rajo ka muujiyey wada shaqeyn dheer oo miro dhal ah.
Source: Dowlada gobolka Tula
"Agoosto-Agro" ayaa dhisi doonta dhisme wiish ah oo qaadi kara 140 kun oo tan oo hadhuudh ah agagaarka Kazan
Tafaariiqleyda iyo Alaab-qeybiyeyaasha: Helitaanka Tanaasul